Directory, Business Website Design & SEO - Ibhizinisi Directory
Ukufakwa kuhlu kwethu kukunikeza ngamabhizinisi amaningi ongadinga usizo kuwo. Siphinde futhi sihlinzeke ngezinsizakalo zewebhu: Lokhu kufaka nezinsizakalo zokwakhiwa kwamawebhusayithi, izinsizakalo zokwenza amakhasi, izinsizakalo ze-SEO, ukuthuthukiswa kwesoftware yangokwezifiso, njalonjalo. Ungathola ochwepheshe ngokubonisana nabo ukuze wakhe ama-akhawunti womsebenzisi, wenze imikhankaso yezokumaketha ye-Social Media nakho konke okunye. Ungaqasha izinsizakalo ze-SEO ezizokusiza ukuklelisa iwebhusayithi yakho ngaphezulu kwezinjini ezinkulu zokusesha ezifana neGoogle, Bing, Yahoo nezinye izinjini ezifanayo. Ababonisi bethu bangakusiza ukuthi ukleliswe ngamagama asemqoka athile futhi usize abantu ukuthi bathole iwebhusayithi yakho.
Izinjini Zokusesha zikwenze kwaba lula kakhulu ukusesha izinto kahle, uma wenze usesho uyakwazi ukuthola izigidi zemiphumela yosesho kuzo zonke izinjini ezinkulu ezifana neGoogle, Yahoo neBing, njll. Kuyasiza ukuthola ibhizinisi, insiza noma umkhiqizo abantu abangafuna ukuwuthenga.
Ukufakwa kuhlu kwethu kuvumela amabhizinisi noma abanikazi bewebhusayithi ukuthi bangeze iwebhusayithi yabo enkombeni yethu. Lapho ibhizinisi lifakwa enkombeni, liphinde lisebenze njengama-backlinks kuwebhusayithi eyinhloko futhi liphinde lenyuse igunya lesizinda. Usebenzisa izinsizakalo ezifanele ze-SEO kuqinisekisa ukuthi uyakwazi ukukhuphuka ngaphezu komncintiswano wakho ngokwemiphumela yenjini yokusesha.
Kunezici eziningana ze-SEO amawebhusayithi okufanele ahambisane nazo ukuqinisekisa ukuthi ziyakwazi ukukala ngaphezulu kunjini yokusesha. Lapho isibalo sezinto iwebhusayithi ikwazi ukwandisa amawebhusayithi ayo, iyakwazi nokukhuphuka kakhulu kunabancintisana nabo. Usebenzisa izinsizakalo ze-SEO, kubalulekile ukuthi ube nolwazi olufanele ngakho. Ukufakwa kuhlu kwethu kukunikeza ochwepheshe be-SEO abangakusiza ngokubonisana nge-SEO nezinsizakalo ze-SEO ezizosiza iwebhusayithi yakho ukuthi ikleliswe phezulu kwimiphumela yenjini yokusesha. Noma ngabe uhlela ukuqala iwebhusayithi noma usunayo i-webhusayithi kepha udinga ukwenziwa kahle, ukuqasha uchwepheshe ohlwini lwesiqondisi kuyindlela engcono kakhulu.
Idizayini Yewebhusayithi Yebhizinisi
Thola okuningi ngewebhusayithi Seo
Izinqubo ze-SEO (Search Engines Optimization) ziyindlela yokumboza izinto eziningi futhi ezingcono kunezingosi ezincintisanayo.
Ideskithophu, iLaptop namadivayisi aphathwayo
Amakhompyutha wesimanje kanye namagajethi aqhubeka nokubuyekeza cishe nsuku zonke, amakhompyutha atholakala ngosayizi abahlukene, ane-software ehlukile kanye nehadiwe, ezinye izici, njll. Ukuvuselelwa ngesikhathi kubalulekile uma ufuna ukusebenzisa yonke indawo nezici ezinikezwa ubuchwepheshe
Uma kubhekwa ukuxazululwa kwamadivayisi ahlukene, kubalulekile ukuthi iwebhusayithi kufanele izenze ikwazi ukulingana nawo wonke amadivayisi futhi ingabi yohlobo oluthile. Le yingxenye ebalulekile yokufaka amakhodi wewebhusayithi, lapho yenza khona iwebhusayithi ihambisane nayo yonke into, yenze isheshe futhi iphendule futhi igcine ukufaka amakhodi kuhlanzekile
Imisebenzi yamakhompiyutha ifaka nezinsizakalo zokulungisa, ukunakekelwa, ukuvuselelwa nokuthuthukiswa okuzoqinisekisa ukuthi ikhompyutha iqhubeka isebenza kahle. Isiqondisi sethu sikunikeza ochwepheshe abangakusiza ngezixazululo zokulungisa amakhompyutha, izingqinamba, ukuthuthuka, ukubonisana ukukhulisa isivinini sekhompyutha nokufeza ezinye izidingo.
Amakhompyutha weDeskithophu neLaptop
Amadivayisi aphathwayo nezincane
Izinsizakalo zokulungisa amakhompyutha ziyadingeka lapho uqala ukubona izinkinga kwikhompyutha yakho ngenxa yezinkinga ezikwi-hardware noma isoftware.
Ukungeza noma ukuthuthukisa ama-hard drive, i-RAM, ikhadi lehluzo, njll. Noma ukuthuthukiswa kwesoftware njengamawindi, amafayela emidiya, njll kubalulekile ngoba kusiza ukugcina ukusebenzisa ikhompyutha ngokuphelele.
Ikhompyutha iyithuluzi elenziwa ngogesi futhi liyafana nanoma iyiphi enye into, nayo idinga ukugcinwa njalo. Lokhu kusho ukuhlanza i-hardware nesoftware ukukhuphula ijubane lekhompyutha, ukuyithuthukisa lapho kubalulekile, njll.
Ukubonisana Kokulungisa Amakhompyutha
Ungahle ucabangele ukuqeda inkinga yakho uwedwa, kepha kuyanconywa ukuqasha ochwepheshe abangakunika imininingwane ebalulekile nezinsizakalo ukuqeda inkinga.
Ukufakwa ohlwini kohla lwemibhalo lwebhizinisi
Umkhombandlela wethu uhlanganisa uhlu lochwepheshe nabachwepheshe abangakunikeza izixazululo zezinkinga zakho, lungasiza ekuqhubeni ibhizinisi lakho ngempumelelo futhi linikeze nokubonisana.
Kuwebhusayithi, izithombe, amavidiyo kanye nokuqukethwe yizinto ezibonakalayo kuwebhusayithi. Ngaphandle kwalokhu, ezinye izinto ozithola kuwebhusayithi zenziwa kusetshenziswa ulimi oluyisisekelo lokufaka amakhodi. Unenketho yokufuna amapulatifomu e-CMS noma abakhi bewebhusayithi online abangakusiza ukudala noma ukuklama iwebhusayithi kalula. Kodwa-ke, le miklamo yethempulethi nayo idalwa kusetshenziswa ulimi oluyisisekelo lokufaka amakhodi futhi ungahlela futhi izifanekiso ngokuya ngezidingo zakho. Ukuhlanganiswa kwezilimi zokufaka amakhodi ezisetshenzisiwe akumele kubangele noma yimaphi amaphutha noma kwehlise isivinini sokulayisha ikhasi, kufanele kube ukukhathazeka.
Kunezinhlobo ezimbili zamawebhusayithi ezingakhiwa
iStatic Site - Ngokuvamile amawebhusayithi ayikhasi elilodwa anokuqukethwe okumile noma okungaguquki. Okuqukethwe okukuwebhusayithi kuyashintsha kuphela lapho kuhlelwa ngesandla.
I-Dynamic Site - Lawa ngamawebhusayithi aqhutshwa yi-database, avuselelwa ngokuzenzakalela lapho okuqukethwe noma ikhasi lengezwa kuwebhusayithi. Le webhusayithi ibhekwa njengeyisebenziseka kalula futhi enezinjini zokusesha eziningi.
Okuningi Mayelana namawebhusayithi
I-HTML5, i-CSS, i-PHP, i-JS Coding
Ukusebenziseka Kwamakhodi Kwe-SEO
Ingabe udinga ukubonisana?
Ukwazi ngokusobala ukuthi iyiphi inqubo namathuba kungasiza ukonga imali nesikhathi ngokukhetha okulungile.
Ukusebenza Kwezinjini Zokusesha
I-SEO ibhekisela ku-Search Engine Optimization; kungenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu zokubeka iwebhusayithi kwiinjini zokusesha. Kunezinyathelo ezimbalwa ezingathathwa ukwenza iwebhusayithi i-SEO ibe nobungane; lokhu kuqala ekuthengeni isizinda, ukuthola iseva yokubamba ukuthola izici nezinsiza ezikunikezayo futhi wakhe iwebhusayithi enekhodi ehlanzekile nevumelekile.
Ukuze ube nokufaka amakhodi okuhlanzekile futhi okuvumelekile, kungadingeka ukuthi ube nolwazi mayelana nokufaka amakhodi noma uthole i-coder yochwepheshe yokwenza iwebhusayithi yokulayisha esheshayo enenjini yokusesha enobungane futhi esebenzisanayo nabasebenzisi. I-SEO ibalulekile ngoba yenza iwebhusayithi ifanele futhi iyivumele ukuthi ithole imiphumela yosesho engcono.
Kunezinhlobo ezimbili ze-SEO -
Lokhu kuhlanganisa nokwandisa amafayela, okuqukethwe nemidiya kuwebhusayithi yakho, kufaka phakathi ukwenziwa kwekhasi, ukwengeza okuqukethwe namathegi, njll.
I-Link Building, ukuhanjiswa kwe-backlinks, ukuhanjiswa kohlu lwemibhalo, nokunye okuyingxenye ye-SEO yangaphandle. Kuyasiza iwebhusayithi ukwakha igunya nokubeka phezulu ezinjinini zokusesha.
Kwenzelwe ikhodi namathegi adingekayo
Ukufakwa kuhlu kwasendaweni, izivakashi, ama-Backlinks
Udinga Ukubonisana kwe-SEO?
Sula imininingwane nge-SEO (Search Engines Optimization) isiza ukuqala endleleni efanele.
Ukuhanjiswa Kwenjini Yokucinga
Izinjini Zokusesha Nokuhanjiswa Kwesiqondisi
Ukuze iwebhusayithi ibe yingxenye yeWorld Wide Web futhi ivele kwimiphumela yosesho kubalulekile ukuthi uthumele i-URL ohlwini lwe-Search Engine kanye ne-Directory. Injini yokusesha nezikhombisi-ndlela ziyasetshenziselwa ukuthunyelwa kokuphakelwa kwesayithi nakho. Ukuthunyelwa kwezikhombisi-ndlela nokuhanjiswa kwezinjini zokusesha kubhekwa njengenye yezindlela ezinhle kakhulu zokwakha igunya lesizinda nokwenza iwebhusayithi yakho ithandwe.
Njengoba udala iwebhusayithi entsha kubalulekile ukuthi uthumele isiza sakho ezinjini zokusesha. Kunezinjini zokusesha ezidinga ukuthunyelwa okuvamile kuwo wonke amakhasi wewebhu owangezayo kuwebhusayithi yakho, kanti kukhona amanye amawebhusayithi akudinga kuphela ukuthi uthumele i-URL yewebhusayithi yakho futhi akhasa emakhasini ukuwathumela ngokuzenzekelayo. Ukuhanjiswa kwesikhombisi kubhekise ekuthumeleni iwebhusayithi yakho kwizikhombisi ezahlukahlukene ngokuya ngezigaba nezigaba ezingaphansi.
Uma unebhizinisi, wenza iwebhusayithi usebenzisa ulimi oluyisisekelo lokufaka amakhodi; ugcina ingxenye yokwenza kahle engqondweni bese uqedela iwebhusayithi. Into elandelayo okufanele ugxile kuyo isezingeni eliphakeme kwimiphumela yenjini yokusesha. Ukuhanjiswa kwesixhumanisi nokuthunyelwa kwe-backlinks kuyindlela yangaphandle ye-SEO okudingeka ukuthi ugxile kuyo ukuze uqiniseke ukuthi unegunya lesizinda eliphakeme lokubeka izinga eliphakeme kunalowo oncintisana naye.
Ungajabulela inzuzo yokuthumela iwebhusayithi yakho noma ibhizinisi kuhla lwemibhalo lwethu ezigabeni ezifanele nezigaba ezingaphansi, lapho abathengi abangaba khona bangathola khona iwebhusayithi yakho noma ibhizinisi kalula.
Izinjini Zokuphakelayo & Izincwajana Zokuphakelayo
Ukuhanjiswa Kwewebhusayithi Kuzinjini Zokucinga
Sifuna ukuthi silethe iwebhusayithi kanye noma imvamisa yesikhathi ezinjini zokusesha nezikhombisi-ndlela eziku-inthanethi?
Ukufakwa ohlwini kohlu lwemibhalo lwewebhusayithi yebhizinisi
Thumela ukufakwa kuhlu kwewebhusayithi esigabeni osifunayo kanye nesigaba esincane ngolwazi, ilogo nezithombe
Ukuhanjiswa Kwewebhusayithi Kwisiqondisi Sethu
Ufuna ukuhambisa iwebhusayithi ku-Directory yewebhusayithi mahhala?